Maxay salka ku haysaa amni xumada soo rogaal celisay ee Soomaaliya? - Caasimada Online
Home Warar Maxay salka ku haysaa amni xumada soo rogaal celisay ee Soomaaliya?
Maxay salka ku haysaa amni xumada soo rogaal celisay ee Soomaaliya?
Amniga Soomaaliya ayaa u muuqda inuu galay marxalad cusub ama qaatay wajhad ka duwan kuwii lagu yaqaannay.
Mana ahan in qolyo cusub ay soo galeen. Waa isla dhinacyadii Soomaaliya isku hayey ee kala ahaa al Shabaab oo dhinac ah iyo xukuumadda Soomaaliya oo garabsanaysa AMISOM iyo maamullada goboleedyada oo dhinaca kale ah.
Marxaladdan ayaa ah in bishan aan weli kala barka gaarin ay iska hor imaadyada u dhaxeeya Alshabaab iyo dhinacyadaas ay kor u kaceen, weerarrada is qarxinta ah ayaa waxaa ku dhintay dad badan, waxaana ku dhaawacmay kuwa kale.
Weerarrada haddii aan mid mid u dul istaagno waxaa ugu horreeyey uguna geeri badnaa kii lagu qaaday xero ay ciidanka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Buulo Guduud ee ku duleedka Kismaayo 3dii bishan September, Ilaa 17 ka tirsan ciidanka maamulka ayaa la sheegay in Al shabaab halkaas ku dileen.
4tii isla bishaas weerar ka dhacay deegaanka Ceelasha Biyaha ee duleedka Muqdisho ayaa waxaa lagu dilay 2 qof,
Waxaa ku xigay weerarro aad isugu dhowaa, sida kii dhacay 7 September oo 5 qof ay ku dhinteen meel lagu shaaheeyo magaalada Baydhabo, sidoo kale 9kii bishana Magaalada Baladweyne 5 kale ayaa ku dhimatay oo uu ka midyahay wariye Maxamed Macalin oo markii dambe dhaawac u dhintay, waxaana weerarka fuliyay qof isku soo rakibay waxyaabaha qarxa oo naftiisa miidaamiyay.
11kii Bishan Sabtember Alshabaab waxa ay weerar ku ekeysay magaalada Balad Xaawo ee xuduudda ku taalla, halkaas oo ay saacado la wareegeen gacan ku haynta, weerarka waxaa ku dhintay dad, kuwa kalana waa ay ku dhaawacmeen.
Isla 11-kii sabtembar weerar ka dhacay magaalada Balcad ee Shabeelada Dhexe ayaa waxaa lagu dilay 4 qof, iyo sidoo kale qof lagu dilay magaalada Muqdisho.
Tirakoobyadan waxa ay ku salaysanyihiin wararka ay warbaahinta faafisay, sheegashooyinka dhinacyada kala duwan iyo xogta goobjoogayaasha, waxaase suurtogal ah in meelaha qaar ay tirooyinka intaas ka duwanaan karaan.
Dowladda cusub ee sannadkan uun xilka la wareegtay waxaa lagu ammaanay in aywax badan ka qabatay amniga, gaar ahaan caasimadda, balse waxa ay u egtahay in markasta oo dowladda ay badasho kaartadeeda dagaalka, ay Alshabaabna badalayaan qorshayaashooda.
Su’aashu haddaba waxay tahay maxaa u sabab ah in intaasoo weerar lagu soo qaado xarummo ay joogaan ciidan u tababaran sugidda amniga iyo difaaca ama bartilmaameedyo rayid ah?. Su’aashaas ayaan hordhignay Jeneraal Maxamed Ibraahim Guubir oo ka mid ahaa milaterigii Soomaaliya, haatanna ka faallooda arrimaha amniga.
“Haddii aad aragto ciidan xeradiisa lagu weeraro, taliyaha ciidammadaas ayaa mas’uuliyadaas qaadaya, waayo ciidanka laguma weerari karo xeryahooda meel cadawgu joogo, ciidanka waxa uu leeyahay korjoogto illaa 3 ama 4 kiilo mitir u jirta oo ah dhankasta oo uu cadaw ka i man karo, ciidankaas oo marka uu dagaalka ku biloowdo ay u gurmadaan ciidanka xerada ku sugan” ayuu yiri Jeneraal Maxamed oo intaas ku daray in taliyaha ciidankaas ay tahay in uu ka jawaabo su’aalo kulul oo ay ka midyihiin halka ay jireen sahankii ciidanka iyo difaacii kore.
“Tan kale ciidanka Alshabaab waxa ay u socdaan labaatan labaatan ama konton konton, war inta aad ciidanka sidaas oo kale u abaabushaan, duurka halaga raadsado nimanka” ayuu yiri Jeneraal Maxamed oo farta ku fiiqayay in ciidammada dowladda ay yihiin kuwa xeryahooda ku eg oo aanan wax weerar ah qaadin.
Soomaaliya waxaa jooga in ka badan 20,000 oo askari oo ah nabad ilaaliyeyaal ka socda midowga Afrika. Hawshooda ugu weyn waxaa la sheegay in ay tahay sugidda amniga madaxda & xarumaha dawladda. Taasi waxay mugdi galinaysaa in amniga guud ee dalka lagu soo celiyo gacanta dawladda, iyo sida ay dadka qaar qabaan dhismaha ciidan Soomaaliyeed oo xoog leh oo hanan kara xilkaas.
Markale Jeneraal Maxamed Guubir ayaa sheegay in ciidanka AMISOM ay 10 sano dalka joogaan, dowladdana ay ku qanacsantahay, walina aysan muuqan wax ciidan ah oo la diyaariyay oo amniga dalka hanan kara.
In kastoo ay xaaladdu sidaas tahay haddana xalku muxuu noqon karaa?. Dhowr qodob ayaan hor dhigay Jeneraal Guubir, waxaana ka mid ah xoog ka sokow bal in la adeegsado xeelad iyo dublamaasiyad la mid ah tan uu isku soo dhiibay laguna soo dhoweeyey Mukhtaar Roobow.
“Rag culus ayaa soo galay oo uu ka midyahay Mukhtaar Rooboow, waxaan leeyahay ragaas halaga faa’iideysto, iyada oo looga faa’iideysanayo nin walba aqoontiisa, iyo awoodiisa, Mukhtaar Rooboow meel ayuu shan sano joogay, intaas xoogiisa ayuu ku joogay, maanta waa in laga faa’iidaystaa” ayuu yiri Jeneraal Maxamed
Sidaas oo ay tahay ayaa waxaas oo dhan waxay dhacayaan ayadoo ay dawladdu u hanqal taagayso in ay amniga gacanta ku dhigto, ayna cududdeeda iyo caqligeeda isugu geyso sidii iyada iyo dawlad goboleedyada ay uga takhallusi lahaayeen halista adag ee uga imaanaysa Alshabaab.
Sida ku cad waxyaabaha waayo-aragnimada laga dhaxlay, Alshabaab markasta waa kuwa weerarro qaada, halka dowladda ay difaacyo uun ku jirto, ayna aad u yaryihiin weerarrada ay qaadaan ciidammada dowladda.
Waxaa kale oo waayo-aragnimada laga dhaxlay in Alshabaab ay aad ugu dadaalaan in ay yareeyaan qasaaraha gaara, haddii uu khasaaro soo gaarana ay qariyaan khasaarahaas, iyaga oo wax kasta u hura sidii ay u qaadan lahaayeen dhaawacyadooda iyo meydadkooda meelaha ay dagaalada ku galaan.
Taas badalkeeda waxa ay had iyo jeer soo bandhigaan sawirro iyo muuqaalo muujinaya khasaaraha ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda, askar ama hub ay kala wareegeen.
Dhanka dowladda waxay markasta sheegtaa tirooyin kala duwan oo dagaalameyaal ah oo laga dilay Alshabaab, balse aad ayay u yartahay cadaymaha ay soo bandhigto.
Balse malaha dhanka la is oran karo guulo ayay ka gaaraysaa ayaa ah hoggaanka sare ee Alshabaab ee la xabad-siibayo, dhawaan waxay dowladda sheegtay in ay dishay madixii Alshabaab ee gobolka Banaadir Sheekh Cali Jabal, hase yeeshee lama oga sida ay Alshabaab wax ugu dhimi karto.
Guulaha ay dowladda mararka qaar sheegato waxaa ka mid ah duqeymo ay geystaan diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka iyo khasaare la sheego in Alshabaab loo gaystay oo aanse caddeymo badan la soo raacinin.
Mid ka mid ah duqeymahaasi oo dowladda ay ku degdegtay in ay sheegato ayaa waxaa dib kasoo baxday in dadka lagu laayay ay ahaayeen dad shacab ah oo beeralay ahaa kuna sugnaa deegaanka Bariire, waxayna dowladda markii dambe ku qasbanaatay in ay magdhow ka bixiso.
Magdhowgaas kadib dowladda waxaa la weeydiistay in ay sidoo kale magdhow ka bixiso dad shacab ah oo lagu laayay duqeymo ka dhacay Jubada Dhexe iyo Gedo, hase yeeshee kama aysan hadlin dalabkaas.
Si kastaba ha ahaatee, mid ka mid ah waxyaabaha lagu micneeyay weerarrada Alshabaab ee kordhay ayaa ah in kooxdan ay ka faa’iideysanayso muranka siyaasadeed ee dowladda hadda ku furan, kaas oo ka mashquuliyay hawlo badan oo amni oo ay wax ka qaban lahayd.
Sidaasi oo ay tahay wali madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu xiranyahay direyska ciidammada, labo maalin ka hor ayuuna ka soo muuqday xero ciidammadu ku tabobartaan, wuxuuna muujiyay sida ay uga go’antahay in uu ciidammada dhiso.